မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: October 2010
Aung San Suu Kyi against her extended house arrest.
Burma's Supreme Court in Naypyidaw heard final defense arguments on Friday in the appeal by pro-democracy leader Aung San Suu Kyi against her extended house arrest.
The three-hour hearing took place before Burma’s Chief Justice, Aung Toe, said Tin Oo, Vice Chairman of the disbanded National League for Democracy (NLD).
Tin Oo said no judgment was delivered, but he expected it to come next week.
Suu Kyi's current term of house arrest is due to end on Nov. 13, less than one week after the Nov.7election.
The Nobel Prize laureate first appealed against her 15-month sentence before the Rangoon divisional court last September. The court rejected her appeal.
On Dec. 21, Suu Kyi's lawyers lodged an appeal with the Supreme Court.
Suu Kyi was initially sentenced to three years in prison with hard labor after being convicted of violating the terms of her house arrest by briefly sheltering an uninvited American intruder, John W. Yettaw, in her home in May 2009.
That sentence was commuted to 18 months house arrest by junta chief Snr-Gen Than Shwe who intervened personally at the conclusion of the trial which most analysts labeledafarce.
Suu Kyi has been detained for more than 14 of the past 20 years.
In the defense appeal, Nyan Win argued that Suu Kyi's house arrest extension was unlawful as it was based on provisions from the 1974 Constitution which was no longer in effect. But government lawyers countered that the 1974 Constitution can still be cited since it was not officially abolished, Nyan Win said.
Posted by Mr Htay Tint at 2:26 AM0comments
Calling for second Pinlon Conference
The Zomi National congress was held on October 22, 2010 in Kalay town, Upper Burma. Ethnic nationalities and Burmese pro democracy leaders called forasecond Pinlon conference by signingadeclaration called “Kalay Myo Declaration.” It was signed by Kachin, Shan, Chin, Mon, and NLD leaders.
The main purpose of the declaration is to stop the coming civil war, which has been burning Burma inside out since it gained independence from Britain in 1948.
After Burma gained independence from Britain, the new government, which was led by Prime Minister U Nu, faced challenge from communist, socialist, and ethnic nationalities. Civil war broke out and communist and ethnic insurgencies spread throughout the country for decades and still exist today.
Gereral Ne Win’s duty was to fight against the insurgents and he emerged asapowerful military leader. The army becameavery strong institution with well trained and obedient soldiers. Ne Win shifted his stance from protecting the country from insurgencies to ruling the country asadictator by way ofastaged coup in March 2, 1962.
Under Ne Win’s rule ethnic resistance groups still existed and controlled the dense forest areas in their respected states. The goal of the ethnic resistance is to form its own country, free from Burma. However after 40 years of civil war and achieving nothing ethnic leaders realized that it is not possible to set up their own. Kachin leaders toured around the world to realize no other country supports their separation from Burma to become an independent country.
After the 1988 uprising, students and activists came out from the cities and joined with the ethnic resistance groups. Both students and ethnic leaders learned from each other and agreed to establish the Federal Union as the best way for all people living in Burma. Ethnic leaders voluntarily abandoned their previous demand, as independent state wasabig achievement after 1988.
Ethnic leaders realized that fighting the military dictatorship only to free its own state was narrow minded and it will only benefit for the regime. They are shifting from previous mentality of fighting for their own people for their own state to fighting for the whole country and joining together hand in hand with all ethnic groups.
The current regime has reachedacease-fire agreement with 17 ethnic resistance groups afteradecade but after the 2008 constitution was approved byafake referendum the regime took the next step by pressuring the cease-fire groups to change as border guard forces under the military control. Small groups obeyed the order and changed as border guard forces but stronger resistance groups that have combat experience for four decades refused to accept the regime’s demand. Kachin, Wa, Karen, Mon and Shan resistance groups rejected the regime demand and now their controlled regions are preparing for the very possible oncoming war against them.
These are the situations that Burma is facing now. The calling for Second Pinlon conference is the right approach and it will stop the coming blood bath. Kachin, Wa Karen and Mon areas have been in peace for more thanadecade. The newly developed infrastructure and more importantly human lives will be destroyed if the war breaks out.
I demand the international governments and pressure groups to consider the situation in Burma. The coming one sided election will not produce peace and stability to the Burmese people, and the new constitution will not give the rights that ethnic groups deserve. Only ethnic conference inside Burma will produce understanding and bring national reconciliation, which will lead the country intoapeaceful place.
Posted by Mr Htay Tint at 2:12 AM0comments
အချောင် သမားများသို့ 
ဘယ် အနာဂါတ် ကို သွားနေတဲ့ မြန်မာစာ ဖတ်သူ ရေးသူများသို့ 
တောင်တွေ မြစ်တွေ ပတ်ပတ်လည် ကာရံ ထားတဲ့ ဒေသ မှာ မွေးခဲ့ကြတယ် ။
ဒေသ အခြေအနေပြည့်စုံမှုကြောင့် နှစ်ထောင် ပေါင်းများစွာ မကြောင့်မကြ နေနိူင်ခဲ့တယ် ။
မြေဆီမြေနှစ် ကောင်းတာကြောင့် တချို့ ဒေသတွေမှာ ယနေ့ အထိ မြေကို မပြင်ဆင်ဘဲ
စပါးစိုက်ပြီး ဝမ်းအေး ခဲ့တယ် ။
သစ်ပင်တောအုပ်ပေါများ လွန်းတော့လည်း သားရဲတိရိစ္ဆာတွေ စားမကုန် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ။
မြန်မာရှင်ဘုရင်တွေ စားတော်ပွဲက ဟင်းလျှာ ၃၀၀ ကျော်ဟာ နမူနာမှတ်တမ်း ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
တခြားနိူင်ငံဒေသတွေက နယ်မြေတွေလု ရိက္ခာတွေစုကြ လုရက်ကြနဲ့ 
နှစ်ထောင် ပေါင်းများစွာ ပြိုင်ဆိုင် စစ်ပွဲတွေ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။
ကျောက်တုံး ကျောက်ပြားတွေကို လက်နက်အဖြစ်သုံးခဲ့တယ် ။
အစားအသောက်တွေကို မီးဖုတ်စားသောက်ရင်း မာကျောတဲ့ ကြေးတုံးစတွေ ရရှိခဲ့လို့ 
ဖန်တီးတဲ့ လက်နက် အဖြစ်စခဲ့ကြတယ် ။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လက်နက် ကရိယာကို တီထွင်ကြံဆ လာရင်း
အင်မတန်မာကြောတဲ့ ဒါးတွေ လှံတွေ ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြတယ် ။
အဝတ်တွေကို အရိုးအပ်နဲ့ချုပ်ရာက
ကြေးသံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အပ်တွေသုံးခဲ့ကြတယ် ။
( ၂၀၁၀ ရောက်သည်အထိ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်တဲ့ အပ်မရှိသေးပါ )
အရှေ့ တောင် အာရှ မြောက်ဖက် ဒေသတွေအားလုံး
မိမိဒေသရပ်တည်ရေး နဲ့ရိက္ခာသိုလှောင်ရေး အတွေးအခေါ်ပေါ် အခြေခံတဲ့
စစ်ပွဲတွေ ဆင်နွဲခဲ့တယ် ။
အဲဒီအချိန်က မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်သူတွေ
အိမ်ရှေ့ တော ထန်းတောမှာလား
ကစော် ခေါင်ရည် အိုးထဲမှာလား
ဇိမ်ခံ ခဲ့ကြတယ် ။
ကမ္ဘာကြီးကို ဒြပ်စင်ပေါင်း ၁၀၄ မျိုးပေါ်အခြေခံပြီး
ဘုရားသခင်က တည်ဆောက်တယ်လို့ 
မှတ်တမ်းများ စနစ်တကျ ပြုစု ပြီး
လူသားများကို ထာဝရ ဘုရားက ဖန်တီးသည်
အတိအလင်းရေးသားသည့် ကျမ်းစာ ပိုင်သည့်
ဥရောပ ဘုရားကျောင်း တခုက ပေါက်ကွဲ စေသော ယမ်းကို
မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့ ရှိခဲ့တယ် ။
ယမ်းဘီလူး လက်နက်တွေ ပေးလိုက်တယ် ။
တီထွင်တဲ့လူမျိုးတွေက သေနပ် မီးရှို့ လို့ အမိန့် ပေး ပေမဲ့
ဝယ်သုံးတဲ့ မြန်မာတွေက သေနပ် ပစ် လို့ အမိန့် ပေးတယ် ။
လက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်ကြရင်း
ကမ္ဘာကြီးကို ပြာကျစေတဲ့ လက်နက် အထိ တီထွင်ခဲ့တယ် ။
ဓါးမနောက်ပိတ် ခွေ အတွေးအခေါ်ကနေ တိုးတက်စပြုလာတယ် ။
ဝေဖန်ရေးနဲ့လေကန်ရေး တွေလေ ။
လူကိုသုံး ငှက်ကိုသုံး မြင်းကိုသုံး
ရေနွေးငွေ့ကျောက်မီးသွေး ရထားကို သုံးရာက
တီထွင် ကြံဆ တိုင်ပင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်နေစဉ်မှာ
မြန်မာ့ အသိုင်းအဝိုင်း ရဲ့ အဖူးအပွင့်
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ဆိုရှယ်လစ် သားကောင်းများရဲ့အတွေးအခေါ်
မြန်မာပြည်ရဲ့ စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီ သားကောင်းများက
အောက်ပါအတိုင်း အများသိရန် ဖြန့် ဝေနေပါသည် ။
မောင်မျိုးကြီး သီဆိုနေသော သီချင်းများကို
တချိန်က ဖါနိူင်ငံလို့နာမည်ကြီးတဲ့ထိုင်းနိူင်ငံမှာ
ဖါတွေရဲ့ ကျွန်လုပ်ငန်းနဲ့ ဝမ်းစာရှာပြီး မိဘတွေကို
ငွေပို့ နေတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား ၂ သန်းကျော်ရှိနေပြီ
မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သင်တို့ မောင်နှမများ အမျိုးများ
ကိုလည်း ဆက်ပို့ ကြလော့
Date: Fri, 22 Oct 2010 18:03:44 -0700
Subject: [Women-Group-Burma] အဆိုတော် မျိုးကြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတဲ့ ပေါ်လစီ သီချင်းဆိုပြီ [1 Attachment]
[Attachment(s) from Than Mg included below]
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ကိုယ်ယုံချက်နဲ့ကိုယ် ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့လူကို ငါစကားနွားရသွားပြောနေရင် ရီစရာကြီး။ သူလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူပဲ... သူဘာသာလုပ်ချင်တာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ သူသီချင်းတွေကိုကြိုက်လို့နားထောင်ခဲတာလည်း အစိုးရကိုမထောက်ခံခဲလိုမဟုတ်ဘူးး အသံကိုကြိူက်လို့နားထောင်တာ. အသံကိုမကြိူက်ရင်နားမထောင်ယုံပဲ. အစိုးရလုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာနဲ့ တခြားဆီပဲ။
October 21, 2010 3:19 AM
တချို့ လှိမ့်ဆဲနေတဲ့သူတွေ နုိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှု လုပ်ပေးနုိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ လှိမ့်ဆဲတာတော့ ဘယ်တုန်းကမှ အလုပ်မဖြစ်သလုို ဘယ်တော့မှလဲ အလုပ်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
နုိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြည်ပမှာ ဆဲလုိုက်ကြတာ။ သတ္တိရှိရင် နေပြည်တော်ရှေ့တည့်တည့်သွားဆဲပါလား။ သူတုို့က အပြင်ကနေဆဲ။ ဒုက္ခသည် လက်မှတ်တောင်း။ ပြည်တွင်းက လူထုက ငတ်၊ ဖာဖြစ်။ သူတုို့က နုိုင်ငံရေး ပိတ်ဆုို့မှု၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆုို့ဘုို့ ပြော၊ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ဗမာမတွေ အတော်များများ အနှိပ်ခန်းထဲ ရောက်ကုန်တာကျတော့ မသိ။ တော်တော် သောက်သုံးမကျကြဘူး။
အခုဘာဖြစ်လဲ။ အနှစ် ၂၀ကျော် ကြာပြီ။ သောင်တင်ပြီး ဒုက္ခရောက်သထက် ရောက်လုိုက်တာ အမေရိကန် က ပြည်ပရောက် ဗမာအစုိုးရအဖွဲ့ကုို ငါးပြားစေ့မှ မထောက်ပံ့တော့ဘူး။ အခု အဲဒီအစုိုးရအဖွဲ့ မဲဆောက် ရောက်သွားပြီ။
ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ လောကကြီး ဘေးထုိုင်၊ ဘုိုင်ကျ၊ ဘုပြောနေလုို့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ တခုခု လက်တွေ့ ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရမယ်။
October 21, 2010 7:13 AM
မင်းတို့ရဲ ဒီမိုကရေစီခေါင်းစောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တစ်ကယ်ပဲတော်ပါတယ်
ပညာလည်းတတ်ပါတယ် အနစ်နာလည်းခံနိုင်ပါတယ်.... အားကျလေးစားစရာပါ
ဒါပေမယ့်ကွာ မင်းတို့လို လေလုံးထွားတဲ့ကောင်တွေ လက်အောက်မှာရှိနေတော့....................... shut တို့ bo တို့
sanay တို့လို လေလုံးနဲ့နိုင်ငံေ၇းလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေက ဒီမိုကရေစီအဖွဲကြီးမှာ များနေတော့ ဘယ်သွားအသုံ့းကျနိုင်တော့ပါ့မလဲ
.x.တဲ့မှ မင်းတို့လို ဖွတ်ကျားတွေများနေမှတော့ မင်းတို့ကောင်တွေ လေထွားရင်း ဒီမိုကရေစီ (လေ) တော်လှန်ရေးကြီး ဆက်လုပ်ကြပေါ့ကွာ
လေပိပီးသေလို့ရတယ် ပြောချက်တွေကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ
ဒီလိုနဲ့ ကီးဘုတ်နဲ့နိုင်ငံေ၇း လေနိုင်ငံေ၇း များကို လုပ်ဆောင်ရင်း ............
ဒီမိုကရေစီ နိုင်င့တော်ကြီး ဆီ ဦးတည်နေကြတာပေါ့လေ
မင်းတို့လိုလေကောင်နောက်လိုက်တွေကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ ဘယ်လိုခရီးဆက်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေတယ်ဟေ့ လေထွားကြီးတွေရေ
October 21, 2010 7:36 AM
မင်းတို့လို နိုင်ငံေ၇းယောင်ယောင်ကောင်တွေက လေပဲထွားကြတာ
-x-တဲ့မှ မင်းတို့ကိုမြောက်ပေး ဟိုမှာနိုင်ငံထဲသောက်ပြသနာတွေတတ်နဲ့
မင်းတို့ကတော့ပြည်ပမှာနေ ရိုက်ထားတဲ့videos လေးတွေကြည့် ... နိုင်ငံထဲမှာက က သောက်ပြသနာတွေတတ်ပီး ကွဲကြပြဲကြတွေဖြစ်
မင်းတို့တွေ ခုလို အတိုင်းသာ အွန်လိုင်းကနေပဲ လေထွားပီးနိုင်ငံေ၇း ထပ်လုပ်နေရင်တော့ နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ လောက် ထပ်ပီး လေလုံးထွား လိုက်အုံး
မင်းတို့ကလေလေးနဲ့ ပြည်ပကနေမြှောက်ပေး ဟုတ်လား.... လီးတဲ့မှ ပြည်ထဲမှာက ကွဲကြပြဲကြနဲ့
အစိုးရက ပေးချင်စိတ်ပေါက်လို့ပေးမှပဲရမယ်.. -x-တဲ့မှပဲ
October 21, 2010 7:45 AM
ပြောပြော နားနားပြီးပြော ဆိုတဲ့စာသားက မျိုးကြီးက သူ့ပါသာ ရိုးရိုးသားသား အချစ်သီချင်းတွေဆိုတယ် အလွမ်းသီချင်းတွေဆိုတာ အနုပညာသဘောသက်သက် သီချင်းတွက်ပဲလုပ်တာ ဒါကို ဒီမိုငတုံးဂရောင်များက လိုရာဆွဲတွေး ဗေဒင်တွက်ချက်ပြီး ဒီစာသားက နအဖ ကိုပြောတာပါဆိုပြီး ပြောလို့ပြော...တော်တော်တော့ရီရတယ်...
ဟော မျိုးကြီးက နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသွားကြစို့ သီချင်းဆိုတော့ကြတောီ့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီ ဒါဟ်ာရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတာပဲဆိုပြီးလုပ်ပြန်လေရော...ဒါနဲ့ပဲ ဝေဖန်လေကန်လိုက် ဆဲလိုက်လုပ်နေတယ်..ဒါနဲ့ တစ်ခုမေးရအုံးမယ် ဒီထဲမှာ မျိုးကြီးကိုဝေဖန်နေတဲ့ကောင်တွေက မျိုးကြီးသီချင်းခွေတွေကို မင်းတို့အိတ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံနဲ့ဘယ်နှစ်ခါ ၀ယ်နားထောင်ဖူးသလဲ?ဘယ်နှစ်ခါများ မျိုးကြီးရှိုးပွဲကို သွားကြည့်ဖူးလဲ? ငါ့အထင်တော့ ဒီထဲမှာ လေလုံးထွားနေတဲ့ကောင်တွေက ရှိုးပွဲနေနေသာသာ စီးရီခွေတောင် ပိုက်ဆံပေးကြည့်တဲ့ကောင်တွေ ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး...
သီချင်းထွက်လာမှ အွန်လိုင်းပေါ် FREE ရလာမှာ နားထောင်တဲ့ကောင်တွေပါကွာ...ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ ၀ယ်မကြည့်ဖူးတို့ နားမထောင်ဘူးတို့ ပြောအုံးမယ်...စောက်ရှက်ပဲ
သို့ မျိုးကြီးကို အားမပေးတော့ဘူးဆိုသူတွေ
အားမပေးတော့ဘူးပြောရအောင် ဘယ်နှစ်ခါများ မင်းတို့အိတ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ပြီး နားထောင်ဘူးသလဲ?ဘယ်နှစ်ခါများ မျိုးကြီးရှိုးပွဲကို ကြည့်ဖူး အားဖူးပေးသလဲ?စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ အနုပညာကိုပဲ ခံစားကြည့်ရှုမြင်တတ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ အမြဲအားပေးနေမှာပဲ...(စိတ်မမှန် မူမမှန်တဲ့သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေရှိပေမယ့်လည်း ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ New York က အနုပညာစိတ်ရှိတဲ့ စိတ်ရင်းမူမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ အားပေးကြည့်ရှုခဲ့သလိုပါပဲ) ...
မူမမှန်တဲ့ကောင် ကိုယ်လိုရာကိုပဲဆွဲတွေးတတ်တဲ့ကောင်တွေ အနုပညာကို အနုပညာလိုမကြည့်ပဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ရောပြီးကြည့်တတ်တဲ့ကောင်တွေကတော့ အစကတည်းက မူမမှန်တဲ့ မူရင်းဌာနေ မြောင်းပုတ်ထဲကိုသွားကြတာပါပဲ...
October 21, 2010 1:26 PM
ဒီမို ဒီမိုလို့ အော် ပြည်ပမှာနေ ဒုက္ခသည်အမည်ခံ ပထွေးတွေပေးတာစား အဆင့်ကြည့်တော့
သူတောင်းစား သာသာ စာမတက်ပေမတက် ဘ၀နောက်ကြောင်းကစုတ်ပြတ်သတ်
တစ်လင်ကွာနှစ်လင်ကွာ ဖင်လိုဖင်ခံ ပြည်ပမှာနေပြီးတော့
ပတ်လိုးပတ်ခံ အချင်းချင်းလည်း ဘာကောင်မှန်းမသိ သူခိုးလား ဂျပိုးလားမသိ
သူရဲးကောင်း ကယ်တင်ရှင်လို့ ခေါ် စောက်ရှက်မရှိ ဒီမိုကီးဘုတ် တိုက်ပွဲဝင် အနာဂတ်မရှိ
ကိုဘ၀ကိုသိ စောက်ဆင့်မရှိတာ အားလုံးသိ
(ဒုက္ခသည် အမည်ခံ ပြည်ပြေးသူခိုး ဂျပိုးများကိုသာ ဆိုလိုပါသည် )(မိန်းမများလဲပါ ဖာသာသာ )(ပြည်ပတွင် ပညာသင်နေသူများ လက်တွေ့ စီးပွားရေးလုပ်နေသူများကို မဆိုလိုပါ)
fucking demo kids ....... XD
Nyo ဆိုတဲ့စောက်ရှူး သြစတြေးလျ က မင်းအဖေပိုင်တဲ့နိုင်ငံမိုလို့လား?
မျိုးကြီး သူလာချင်လာမှာပေါ့ မင်းစောက်အပူပါလား မလာရအောင် မင်းနိုင်ငံလား မင်းတားပိုင်ခွင့်ရှိလား...မျိုးကြီးသူ့ပါသူလာချင်လာမယ် မလာချင်မလာဘူး ကမ္ဘာပါတ်ချင်ပါတ်မယ် မင်းတို့စောက်အပူအလုပ်မဟုတ်ဘူး..မအေလိုးတွေ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်...စောက်စကားကိုများတယ်...
October 22, 2010 5:29 AM
Posted by Mr Htay Tint at 5:35 AM0comments
Burma news in Netherland
donderdag 14 oktober 2010TV serie:
၁၄ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၀ နေ့ တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် တခုတွင် ၂၀၀၉ မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်များကို ကျန်းမာရေး ရှု့ ထောင့်မှ ရိုက်ကူးတင်ပြ ထားပါသည် ။
မြန်မာပြည်အပါအဝင် တတိယနိုင်ငံများသို့ ငွေစက္ကူများ ထုတ်လုပ်ပုံနှိပ်ရန် စက္ကူကုန်ကြမ်း ထုတ်လုပ် ပို့ နေသော သူဌေးကြီးမှ မြန်မာကောင်စစ်ဝန် အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေပြီး ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ပေးခဲ့သည် ။
Wildcard MyanmarWildcard Myanmar is een vijfdelige reeks waarin schrijver en acteur Ramsey Nasr samen met een groep geneeskundestudenten van de Universiteit Antwerpen op missie vertrekt naar Myanmar, een land met een kwalijke reputatie: niet alleen op politiek gebied, maar ook inzake medische voorzieningen. Er is dus werk aan de winkel voor de toekomstige artsen die in het exotische Myanmar voor het eerst aan veldwerk doen. Ramsey Nasr krijgt een ‘wildcard’ en mag mee. Hij wordt een bevoorrechte getuige én een leergierig missielid. Hij helpt waar hij kan en reflecteert op zijn eigen manier over het werk van de missie en de toestand van dit mooie land met zijn rijke cultuur en zijn grote sociale en politieke problemen. Wildcard Myanmar, te zien op Canvas wekelijks vanaf donderdag 14 oktober om 20.40 uur. Als ik heb klaar van edited filem, Ik wil stuur video van canvas TV.
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ မြန်မာပြည်သားများရဲ့အခြေခံလူ့ အခွင့်ရေး လွတ်လပ်မှုဟာ အရေးကြီးဆုံးလို့ မြင်ပါတယ် ။ စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး အစသဖြင့် အဖွဲ့ အစည်းများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တွင်မြန်မာပြည်၏ လူသားတဦးအဖြစ်ရပ်တည်ရန် အခွင့်အရေး မရနိုင်သော မကောင်းသတင်းများသာ ပြောဆိုနေကြသည်ကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ထားရှိရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ ကြီးအနေဖြင့် အလေးပေးဆောင်ရွတ်လိုကြောင်း ရရှိလာသောမှတ်တမ်းမှတ်ရာများမှတဆင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းပြီး နယ်သာလန်မှ ဆက်လက်ဆောင်ရွတ်မည်ဟု ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ မှ ပါလီမန်အမတ်တဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။
ကျွန်တော်ကတော့ မီးလောင်တိုက်ထဲကလို ဖြစ်နေသော မြန်မာပြည်အတွက် မျှော်လင့်နေပါတယ် ။
အမြဲတန်းကြိုးစားနေပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး နဲ့လူ တဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်ခွင့်များကို စစ်တပ်က တိမ်တိုက်များကဲ့သို့ ပိတ်နေသော်လည်း အမြဲတန်းမဖြစ်နိုင်ပါ ။။ ဒန်းဟတ်(Dan Haag ) မှရုံးထိုင်သော်လည်း မြန်မာပြည်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်ဂျီယန်မှ ဘရာဇယ် ရုံးနှင့်ဖြစ်စေ အသင်းတော်ရုံးများဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွတ်နေပါတယ်လို့ခရစ်ယာန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ပါလီမန်အမတ်တဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။
အဲဒီမှာ ထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်းပုတ်ကိုကြည့်ပါ ။ပါတီတွေ ဘယ်လောက်များသလဲ ဘယ်လောက်လွတ်လပ်သလဲ လူတဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ကို ပြနေတာ လို့ ခရစ်ယာန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ပါလီမန်အမတ်တဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။
မြန်မာပြည်ဟာ တခါးအားလုံးကို အများဆုံး ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် ။ မြောက်ကိုရီးယားထက် အခြေအနေ ဆိုးပါလိမ့်မယ် ။အပြည်ပြည်ကတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကူညီရန် ခက်ခဲနေဆဲပါ ။ လွတ်လပ်မှု နဲ့ အခြေခံ အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်တွေကို တစက်ခြင်း ရသလောက်ညစ်ထုတ်ရ မှာပါ ။ အဲဒီအပေါ်ကနေ မှတ်တမ်းများ ထားရှိပြီး တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ အစိမ်းရောင်အချိတ်အဆက်ပါတီ ပါလီမန်အမတ်တဦးက ပြောကြားခဲ့ပါသည် ။
မူရင်းဗီဒီယို ကိုနားထောင်လိုလျှင် အောက်ကို ကလစ်လိုက်ပါ ။
(မြန်မာပြည်သားအချို့ လို လုပ်စရာမရှိရင် သန်းရှာအတင်းပြော အုပ်စုကိုသတိပေးတာထင်တယ်)
Posted by Mr Htay Tint at 2:59 PM0comments
Wet inburgering voor Birmase နယ်သာလန်နိူင်ငံသား ဥပဒေ
Copier van http://www.inburgeringscursus.net/inburgeringscursus-wet-inburgering.html
In Nederland Nadat u het basisexamen inburgering heeft gehaald en naar Nederland bent gekomen, နယ်သာလန် နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်လာရန် အတွက် အခြေခံ ဗဟုသုတကို ဒတ်ချာ် ဘာသာဖြင့် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီးသည့် အခါတွင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့ နယ် မြူနီစပယ်ရုံးများတွင် စတင်တောင်းဆိုလျှောက်ထားနိူင်ပါသည် ။ Moet u ook nog een inburgeringscursus volgen in Nederland. နယ်သာလန် သံရုံးများမှ စာမေးပွဲအောင်မြင်လာခဲ့သော်လည်း နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အခြေခံ ဗဟုသုတ သင်တန်းသား အဖြစ် ထပ်မံတက်ရောက်ရန်လိုပါသည် ။ Hiervoor moet u een ander examen afleggen: het inburgeringsexamen. အောက်တွင် စာမေးပွဲ နှင့်ပါတ်သက်သော သိသင့်သော အကြောင်းများကို ဆက်လက်ရှင်းပြထားပါသည် ။ Inburgering wil zeggen dat immigranten die langdurig in Nederland komen wonen de taal spreken, အခြေခံ ဗဟုသုတ သင်တန်းတွင် အတူတကွ ကြာရှည်စွာ နေထိုင်သွားရန် နယ်သာလန် စကားဖြင့်သာ ပြောဆိုမည် ဖြစ်ပါသည် ။ op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving en een aantal belangrijke normen en waarden kennen. နယ်သာလန်နိုင်ငံသားများနှင့် အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ရေး အပါအဝင် သိသင့်သိထိုက်ပြီး မှတ်သားနာယူ သင့်သည့် အရေးကြီးအရာများကိုသာ အမြင့်ဆုံး မိတ်ဆက်သင်ကြား သွားမည်ဖြစ်ပါသည် ။ De Nederlandse overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren. နယ်သာလန်အစိုးရ အနေဖြင့် ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် အခြေခံ ဗဟုသုတများကို ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ De eisen voor inburgering zijn vastgelegd in de Wet inburgering. နိုင်ငံသားတဦး သိသားသင့်သည့် လိုအပ်ချက်များသာ နိူင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ ဖြစ်ပါသည် ။ Deze wet is sinds 1 januari 2007 van kracht. ယ္ခု ဥပဒေသည် ၁ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည် ။ ( အပိုချပ် ၁၁ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၁ နောက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး ဥရောပတွင် အကြမ်းဖက်သမားများ နှိမ်နင်းရေးနှင့် ဥရောပနေထိုင်သူများ အသိဥာဏ် ဖွံဖြိုးရေးအတွက် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွတ်လာသော စီမံချက်ဥပဒေများ ဖြစ်သည် အကြမ်းဖက်သော အုပ်စုများ အဖွဲ့ အစည်းများ အစိုးရများ ကိုလည်း အဆင့်ဆင့် အသိပေး ပညာပေး ဒဏ်ပေး ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းများကိုလည်း အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွတ်နေဆဲ ဖြစ်သည် ။
၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး နယ်သာလန် စကား စာပေကို သင်ကြားလိုသူသည် မိမိ စရိပ်ဖြင့်သာ သင်ကြားရမည် ။ ကုန်ကြစရိပ်မှာ ၁ နှစ်လျှင် ၇၀၀၀ ယူရိူ ဖြစ်သည် ။)
Immigranten hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ နယ်သာလန်နိူင်ငံသား တဦးဖြစ်လာရန် နိုင်ငံသား အခြေခံဥပဒေ သိရန်လိုအပ်ပါသည် ။ wanneer ze geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen. နိုင်ငံသား အခြေခံ ဗဟုသုတတ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့ သည့် အချိန်တွင် In tegenstelling tot inburgeren in het buitenland wordt een inburgeringscursus geheel of gedeeltelijk vergoed en zijn er in sommige gevallen subsidie of een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. သင်ကြားလေ့လာချိန်များတွင် ကုန်ကျစရိပ်များကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေ ပြန်လည် တင်ပြ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။ Is de Wet inburgering hetzelfde als de Wet inburgering buitenland? နယ်သာလန်ပြင်ပတွင် နေထိုင်သူများ နေဖြင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု အခြေခံဥပဒေ တူညီမှုရှိပါသလား ။ (မျက်စိညောင်းပြီး ခေါင်းကိုက်လာလို့ခဏနားပါမည် ။ ၁၃ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၀ )
Nee, နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု အခြေခံဥပဒေ တူညီမှုမရှိပါ
dit zijn verschillende wetten.
ဒီဥပဒေ သက်ရောက်မှုသည် ကွဲပြားခြားနားပါသည် ။
De Wet inburgering buitenland is ingegaan op 15 maart 2006.
၁၅ မတ်လ ၂၀၀၆ မှစတင်ပြီး နယ်သာလန်ပြင်ပတွင် နေထိုင်သူများ စတင်အာဏာသက်ရောက်သည် ။
Die wet is er voor iedereen die voor langere tijd in Nederland wil komen wonen.
ဥပဒေသည် နယ်သာလန်နိူင်ငံတွင် အချိန် ကာလရှည်ကြာစွာနေထိုင်မည့်သူများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည် ။
Zij moeten de Nederlandse taal al een beetje kunnen spreken en iets afweten van Nederland,
ထိုသူများသည် အခြေခံ နယ်သာလန်စကား နှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို မဖြစ်မနေ သိထားရမည်ဖြစ်သည် ။
voordat ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen.
ဦးစွာ နယ်သာလန်တွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုချက် ကို ရယူရမည်ဖြစ်သည် ။
Met name migranten die voor huwelijk en relatie in Nederland willen verblijven.
ထိုခွင့်ပြုချက်ကို နယ်သာလန်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူ၏ လင်မယား ဆွေမျိုးမှတဆင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည် ။
Eenmaal in Nederland moet men zich inschrijven voor een inburgeringscursus ter plaatse.
Basisexamen Inburgering Buitenland - Inburgeringscursus De plicht om eerst in het buitenland het basisexamen inburgering te doen, geldt voor veel mensen van 18 tot 65 jaar die, om naar Nederland te kunnen komen, een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig hebben. Het betreft onder meer mensen die een gezin willen vormen (bijvoorbeeld huwelijk en relatie) met iemand in Nederland, maar ook mensen met een geestelijk beroep zoals imam of predikant. Dat betekent dat het behalen van het inburgeringsexamen in veel gevallen een extra voorwaarde wordt voor het verkrijgen van een MVV. Het Inburgeringsexamen Buitenland - Inburgeringscursus Het basisexamen inburgering: Bij het examen wordt de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving getoetst. Het examen wordt mondeling, in het Nederlands afgelegd bij de Nederlandse ambassade of Consulaat-Generaal in het buitenland. De kosten van het examen bedragen €350. Het examen bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. Aan de hand van een boekje met afbeeldingen wordt telefonisch een aantal vragen gesteld. De vragen gaan onder andere over de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland. In deel2wordt de kennis van de Nederlandse taal getoetst. Dit onderdeel bestaat onder meer uit het nazeggen van zinnen en het beantwoorden van korte vragen. U kunt u voorbereiden door middel van een inburgeringscursus. Het inburgeringsexamen in Nederland Inburgering, vrijstelling inburgeringsexamen Beschrijving U kunt vrijstelling aanvragen voor een deel van het inburgeringsexamen als u voldoende mondelinge en schriftelijke kennis heeft van de Nederlandse taal. U moet dit aantonen door een verklaring te laten zien van een regionaal opleidingscentrum (ROC). Uit de verklaring moet blijken dat u het NT2-taaltraject met goed resultaat heeft afgelegd. Dat is het geval als u voldoet aan bepaalde niveaus van de eindtermen Referentiekader Nederlands als Tweede Taal of van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen. U moet dit traject voor 1 januari 2007 hebben afgerond. Ook kunt u vrijstelling aanvragen voor het mondelinge deel van het inburgeringsexamen als u het basisexamen inburgering in het buitenland met goed resultaat hebben afgelegd. Dit moet blijken uit een beschikking. Voorwaarden Om voor een vrijstelling in aanmerking te komen moet u voldoen aan een de volgende voorwaarden. Voor vrijstelling van het mondelinge en schriftelijke deel van het inburgeringsexamen: U bent geen oudkomer. Uit de verklaring blijkt dat u voor Nederlands als tweede taal voldoet aan de volgende niveaus: - niveau 2, respectievelijk A2 voor de onderdelen Luisteren en Spreken; - niveau 2, respectievelijk A2 voor de onderdelen Lezen en Schrijven. U bent oudkomer. Uit de verklaring blijkt dat u voor Nederlands als tweede taal voldoet aan de volgende niveaus: - niveau 2, respectievelijk A2 voor de onderdelen Luisteren en Spreken; - niveau 1, respectievelijk A1 voor de onderdelen Lezen en Schrijven. U beschikt over een van de volgende certificaten Nederlands als Vreemde Taal: - Certificaat Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (ERK-niveau B1); - Certificaat Profiel Professionele Taalvaardigheid (ERK-niveau B2); - Certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (ERK-niveau B2); - Certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid (ERK-niveau C1). Voor vrijstelling van het mondelinge deel, als u het basisexamen in het buitenland heeft gedaan: U heeft een beschikking van het basisexamen inburgering in het buitenland en daaruit blijkt dat u voor het onderdeel luister- en spreekvaardigheid ten minste 37 punten heeft behaald. Aanpak U vraagt de vrijstelling aan bij de gemeente waar u het inburgeringsexamen moet afleggen. Copier van http://www.inburgeringscursus.net/inburgeringscursus-wet-inburgering.html
Oefenen voor inburgering met de computer en internet
ကွန်ပြူတာရှိသော သင်တန်းသားများ အင်တာနက်မှ လေ့ကျင့်ရန်
မိတ်ဆက် ဝေါဟာရနှင့် အသံထွက်များ
နယ်သာလာ အတွင်းသို့ ပိုမိုဝင်ရောက်ခြင်း
နယ်သာလန်နိူင်ငံတွင်းနေထိုင်သောသူများ သိထားရမည့် အခြေခံအချက်များ
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်တွင်ကာလတွင် ကြုံတွေ့ လာမည့် အခြေအနေနှင့်
အခက်အခဲများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ခဏ်များနှင့်
နယ်သာလန် အမေး အဖြေ လေ့ကျင့်ခဏ်း ၂
အစိုးရ၏ တရားဝင် အင်တာနက်စာမျက်နှာ
Posted by Mr Htay Tint at 12:47 PM 1 comments
5000 kyat pas op
ပြည်သူ့ အစိုးရ အတုတွေ အဖြစ် ဖန်တီးနေတုံး
၅၀၀၀တန်ငွေ စက္ကူများ အတုထွက်ပေါ်နေ
အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူ အတုများ ပေါ်ထွက်နေပြီး ဘဏ်များတွင် အများဆုံး တွေ့ရှိနေရသည်ဟု သိရသည်။
ထို သတင်းကြောင့် သုံးစွဲသူအချို့က သတိထားပြီး လက်ခံနေသည်ဟု သိရသည်။
ဘဏ်တွေမှာ ၅၀၀၀တန်တွေ ငွေစက္ကူတွေ အများဆုံး တွေ့နေရတယ် လို့ ဘဏ်က ၀န်ထမ်း တွေ ပြောပြလို့ ကျွန်တော် သိရတာပါ။ တရွက်ချင်းစီကတော့ သုံးဖို့ မလွယ်ဘူးလေ။ အုပ်လိုက် ဆိုတော့ရော ထည့်လိုက်လို့ ရတာပေါ့။
အတု ဆိုတာကလည်း ဘဏ်က ၀န်ထမ်းတွေမို့ သိတာလေ။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုရင် သိမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း ကားခ ယူရင် ငါးထောင်တန် ယူရမှာတောင် ခပ်လန့်လန့်ပဲ။´ဟု ရန်ကုန်မြို့က တက္ကစီ မောင်းသူ တဦးက ပြောပြသည်။
ဘဏ်ဝန်ထမ်းတဦး၏ အဆိုအရ ငါးထောင်တန် ငွေစက္ကူ အစစ်တွင် ဂဏန်းစာလုံး ၅၀၀၀ မှာ ဖောင်းကြွ ဖြစ်ပြီး လက်ဖြင့်ပွတ်ကြည့်ယုံနှင့် သိနိုင်သည် ဟုသိရသည်။ အတုတွင်မူ ဖောင်းကြွစာလုံး မဟုတ်သဖြင့် တပြင်တည်း ဖြစ်နေသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ငါးထောင်တန်တွင် ပါဝင်သော ငွေကြိုးမှာ အပြားကြီးပြီး အတု၏ ငွေကြိုးမှာ မျှင်မျှင် မျှသာ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
`အခု လက်ရှိ စက်ပစ္စည်းတွေက အရမ်း တိုးတက်လာတော့ အတု လုပ်ဖို့က ပိုလွယ်လာတယ်။ နောက်ကျ မကြားဘူးတာ ငွေ၁၀၀၀တန်တွေ ထုတ်တုန်းက ကင်နွမ် ကာလာ ပရင်တာ နဲ့တောင် ထုတ်ပြီး အတု လုပ်နိုင်တယ်တဲ့။
ကျွန်မကတော့ အတု လုပ်ရင် ၅၀၀၀ တန်ထက် ၅၀တန်နဲ့ ၁၀၀တန်တွေ ပိုလုပ်စေချင်တယ်။
ဒါမှ အကြွေရှားတဲ့ ပြဿနာ နည်းနည်ဲး ငြိမ်းမှာ´ ဟု ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တဦးက ပြောပြသည်။
၅၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူကို ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့က စတင် ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထုတ်ဝေခါစ လများက သုံးစွဲသူများ အကြား တွေ့ရလေ့ မရှိသော်လည်း တနှစ်အကြာတွင် နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုတွင် ပမာဏများစွာ ပါဝင်လာနေသည်ဟု သုံးစွဲသူများက ပြောသည်။
ယခုအခါ ဘတ်စကားစီးခ ပေးရာတွင်လည်ေးကာင်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင် လည်းကောင်း သုံးစွဲနေကြပြီဟုလည်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ခံ အချို့၏ အဆိုအရ စီတီးမတ် ကဲ့သို့ ကုန်တိုက်ကြီးအချို့က ခေါက်ချိုးခေါက်ထားသည့် ငါးထောင်တန်ကို လက်မခံကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ လူအများ အတုဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
Posted by Mr Htay Tint at 6:24 AM0comments
ကို ကလစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဖတ်ပါရန်
Nieuwe website Burma Centrum
De nieuwe website van het Burma Centrum Nederland, www.burmacentrum.nl is nu online. De verkiezingen, gehouden op7november in Myanmar, staan centraal op de nieuwe website.
Rapport over politieke landschap verkiezingen
In samenwerking met Transnational Institute (TNI) heeft het Burma centrum een rapport uitgebracht over het politieke landschap en de komende verkiezingen. U kunt het rapport hier downloaden en lezen. Voor meer informatie kijk ook op deze website van TNI/BCN
Aung San Suu Kyi op 13 november vrij?
Het Birmese regime zegt dat de Birmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi op 13 november wordt vrijgelaten, een paar dagen na de eerste verkiezingen in Birma sinds 20 jaar. Daarmee zou een einde komen aan zeven jaar onafgebroken huisarrest. Lees meer...
Verhagen voorstander VN onderzoekscommissie Birma
Lees hier de Kamerbrief inzake Commision of Inquiry Birm van4oktober.
Ban Ki-moon roept op tot eerlijke verkiezingen en vrijlating politieke gevangen
UN- secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft woensdag6okotber de Birmese junta opgeroepen om "credible and inclusive" verkieizingen te houden en alle politieke gevangenen voor de verkiezingen vrij te laten.
ASEM8-leiders roepen op tot vrijlating politieke gevangenen Birma
De Europese en Aziatische leiders die momenteel samenzijn in Brussel in kader van de ASEM-top, maken zich op om het Myanmarese regime op te roepen zijn politieke gevangenen vrij te laten en op7november vrije en gelijke verkiezingen te organiseren.
Het volk vecht tegen angst in Myanmar
Voor het eerst in twintig jaar organiseert de militaire dictatuur in Myanmar nog eens verkiezingen. Niemand gelooft dat de stembusgang in november vrij en democratisch zal verlopen. Toch is er in het gouden land tussen China, Thailand en India meer dan repressie en stilstand.
Het Burma Centrum publiceert elke week een web blog met observaties van onze contacten uit Birma in de aanloop naar de verkiezingen. Zie hier het web blog
Voor achtergronden over de verkiezingen in Birma/Myanmar lees de informatie in het dossier verkiezingen op de website.
Publicaties over de verkiezingen zijn hier te vinden.
Steun Birma, steun Burma Centrum
Via een aankoop op onze webwinkel of een eenmalige donatie, kunt u ons werk voor Birma financieel steunen. U bijdrage is van harte welkom!
Verkiezings evenement in Amsterdam
aanvang 15.00- 17.30
voor het programma, check half okttber voor meer informatie de website.
Benefiet Filmavond in Balk, Fryslan
De stichting We women organiseert een benefiet film- en informatie avond om geld in te zamelen voor vrouwen uit Birma die geen kans op onderwijs hebben. Lees meer..
Benefiet cabaretavond in Amsterdam
De stichting We women organiseert een benefiet cabaretavond voor vrouwen uit Birma die geen kans hebben om te studeren. Lees meer...
TV serie: Wildcard Myanmar op Canvas
Wildcard Myanmar is een vijfdelige reeks waarin schrijver en acteur Ramsey Nasr samen met een groep geneeskundestudenten van de Universiteit Antwerpen op missie vertrekt naar Myanmar, een land met een... Lees meer...
Benefiet filmavond in Utrecht
De stichting We woman organiseert een benefiet film- en informatie avond om geld in te zamelen voor vrouwen uit Birma die geen kans op onderwijs hebben. Kom kijken naar de bekroonde film Burma VJ.
Burma Centrum Nederland - email: contact@burmacentrum.nl - web: burmacentrum.nl
Posted by Mr Htay Tint at 1:31 AM0comments
USA Action on Burma Army
The U.S. Government’s Actions on Burmese Military Regime
QUESTION: And on the other hand, I’ve spoken to ASEAN Secretary General Dr. Surin after that ASEAN-U.S. summit, and he told me that it was only the foreign minister of Burma who mentioned about the upcoming election in passing, and President Obama didn’t say anything, or it wasn’t talked about in that meeting. Can you confirm that? And does that indicate somehow the election in Burma is not so muchapriority for the U.S.?
ASSISTANT SECRETARY CAMPBELL: First of all, we had very deep discussions onarange of issues, and I’m not going to characterize every detail of the discussions that took place between the leaders. But the U.S. position has been very clear over the course of the last several weeks that we are disappointed by the steps that the government has taken in advance of the upcoming election, and we see no signs that there will be legitimacy associated with this process. And recent reports that balloting will be deeply restricted in ethnic areas is worrisome.
All that being said, we also recognize that after the elections, there may beadifferent correlation of players, different relationships, different actors that may emerge that could create the opportunity for some sort of engagement that would advance not only American interests, but the interests of others in the region and the dispossessed inside the country asawhole.
QUESTION: Because you have visited the country since the last (inaudible) year when America turned their policy from not talking to engagement. What sort of achievements that has resulted so far, you think?
ASSISTANT SECRETARY CAMPBELL: I think we’ve tried to be very honest and very clear in our assessments of our engagement strategy to date, and I think the benefits have been quite limited. And we have tried to underscore that this will bealongstanding process. It will not be an easy road, but that previous efforts at total isolation have failed as has frankly the efforts of complete open-arms engagement. We think the mixture of tactics and our overall approach are the right way to proceed, but we also understand that this overall effort is going to require substantial patience.
I will say that we think one of the benefits has been it has allowed us to haveadifferent kind of dialogue with ASEAN. And I think in the past, our policy on Burma, on Myanmar, has made it difficult for certain kinds of engagement. I think the truth is that there is an overriding strategic priority on the part of the United States forastronger engagement with ASEAN. We’ve attempted to undertake suchadialogue, such an engagement strategy. But at the same time, we’ve tried to stay true to our principles in being very clear about what our expectations are in terms of inside the country asawhole.
QUESTION: I haveafollow-up question for Japan-China region. So Japan come to China with compensation demands for coast guard ship damages, so even after the release of the captain, there still remain (inaudible). But do you also agree that Burma has been already (inaudible)? How do you see that situation?
ASSISTANT SECRETARY CAMPBELL: I’m not going to characterize the subsequent back and forth on these issues. I would simply say that I think that the Japanese decision to release the captain – it’sadifficult decision – but I think does show statesmanship on the part of the Kan administration and also the – of new Foreign Minister Maehara.
QUESTION: Oh, hi. It’s back on Myanmar or Burma. A couple of Security Council members, including (inaudible) the U.S. has called foraUN panel of inquiry into war crimes committed in Burma, andalot of people have said that it can’t happen until after the election. Is thatapossibility the U.S. is considering when you talk about new relationship (inaudible)?
ASSISTANT SECRETARY CAMPBELL: Yeah. I don’t think I’ll have very much to say on that issue at this time. I think what we have tried to indicate is that we have not ruled anything out either on this issue or others, including sanctions on the way forward. We are looking at what transpires in November in terms of the way forward. And we reserve the right to take steps either to respond to positive steps or negative ones.
Posted by Mr Htay Tint at 1:05 AM0comments
Waihnin Pwint Thon Speaks for Burma
အေးမြမှုထုထည်က ကြီးမားတယ် ။
တိုးတက်မှုဟာ ဆက်လက်ရှင်သန်နေတယ် ။
ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝနဲ့ မိန်းမပျိုလေး အသွင်။
သာမာန်ချိန်မှာ သိုးမလေး အသွင်နဲ့ 
လိုအပ်ချိန်မှာ ခြသေ့်မလေး ဝိဥာဏ်နဲ့ ။
အေးမြပြီး စူးရှထက်မြက်နေတယ် ။
နားထောင်သူတွေ အားလုံး နားလည်အောင်
ရသမျိုးစုံနဲ့ပြောပြတတ်တယ် ။
သူ့ အတွက် ဆိုတာထက်
သူနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်က လူတွေအကြောင်း
လူသားတဦးရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေ
သူ့ ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဖခင်အကြောင်း
အသက်အရွယ်က ၂၁ နှစ်
ဖွံ့ ဖြိုးနေတဲ့ တိုင်းပြည်က လူငယ်တွေ
လူ့ အခွင့်အရေးတွေ ပျောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်
အရာရာကို သေနပ်ပြပြီး အမိန့် ပေးတဲ့ တိုင်းပြည်
အများအကျိူးဆောင်ရွတ်သူတွေ ထောင်ထဲမှာဘဲနေခွင့်ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်
မနာလိုမှုတွေကြီးထွားပြီး အလုပ်မရှိ အတင်းတုတ်တဲ့ တိုင်းပြည်
သူ့ ကို ဘယ်သူဝိုင်းကူကြမှာလည်း။
A Young Aung San Suu Kyi was Born
When I watched the stunning speech made by Wai Hnin Pwint Thon at the UK Labor Party Conference, I was very delighted and my tears rolling down from my cheeks, I cannot stop it because I seeayoung Aung San Suu Kyi emerged from the new blood line, the fresh and new generation that we are looking for.
Wai Hnin has proved that she has commitment for our cause and show her ability asagood speaker. We needanew blood line for our struggle, the military regime has been recruiting and training new military cadets for its dominant on Burmese politics. We need to encourage our young blood line to organize and build connection to each other, remind them to remember their father and mothers, uncles and aunts, brothers and sister who are suffering under the military boots.
We need to seek many young Aung San Suu Kyis and many Min Ko Naings for our struggle. After 22 years of nation wide uprising in August 8, 1988, the new blood line has come to age. As senior old activists, the 88 generation hasaduty to make connection with their son and daughters who are now studying in different cities and countries around the world. It is our duty to unite all those new revolutionary blood line.
National Endowment for Democracy (NED) and Open Society Institute (OSI) need to give funding for hostingaconference for the Burma new generation who grown up in North America, EU and Asia. “New Blood Burmese Activist Youth Conference” will let them to connect each other and work together asateam to fight against the military dictatorship.
Fundingaphotographer for taking photographs at the border areas, giving fund to an individual to writeabook, giving scholarship to people who came out from Burma by legal passports and never return to Burma after their graduation were waste of time and money. It will never help for democratic change in Burma. NED and OSI need to create the fresh ideas and new action.
I would like to ask who is willing to help for the “New Blood Burma Activist Youth Conference”? Who wants to see it happening? I invite all of you to discuss this dream conference to becomeareality. Please email me or call me for discussion. Old blood are not fresh enough to lead we need new blood like Wai Hnin, it is our duty to promote them and help them for their destiny, so that we are going to get freedom in the near future.
Watch the below clips if you did not see it yet.
ကျွန်တော် ဝေနှင်းပွင့်သုံရဲ့ ဗြိတိသျှလေဘာပါတီကွန်ဖရင့်မှာ တက်ရောက်ပြောကြား ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးကို ကြည့်ပြီး အရမ်းဝမ်းသာကြည်နူးပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့ ပါးပြင်တလျှောက် စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ဘို့ ကျွန်တော် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သွေးသစ်လူငယ်များထဲမှ အောင်ဆန်းစုကြည်လေးတယောက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကို ကြည့်ရင်း ကြည်နူးမိလို့ ကျတဲ့ မျက်ရည်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ဝေနှင်းပွင့်သုံဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို ကြိုးစားမယ့် လူငယ်တဦးဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ မိန့်ခွန်းပြောကောင်းသူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲအတွက် သွေးသစ်လူငယ်များ အများကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။
စစ်အုပ်စုဟာ ဗိုလ်လောင်း မြောက်များစွာကို မွေးထုတ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို စစ်အာဏာ စက်အောက်မှာ ထားဘို့ ကြိုးစားနေခဲ့တာ ရာစုနဲ့ချီ ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လူငယ်သွေး သစ်များကို အားပေးပြီး တဦးနဲ့ တဦး ဆက်သွယ်နိုင်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေကို ချပေးရမည့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီလူငယ်တွေ တဦးနဲ့တဦး ဆက်သွယ်ကြပြီး မိမိတို့ ကျွမ်းကျင်ရာ ပညာတွေကို ဖလှယ်ကြရင်း အမိမြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အဖိုးအဖွား၊ အဖေအမေ၊ ဦးကြီး၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်ကြီး၊ ဒေါ်လေး၊ အစ်ကို၊ အစ်မ၊ မောင် ညီမတို့ရဲ့ ဒုက္ခကို ဘယ်လို ကယ်တင်ကြမယ်ဆိုတာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရကြရင် အရမ်း အကြိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်လေးပေါင်းများစွာ၊ မင်းကိုနိုင်ပေါင်းများစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေကို မြေတောင်မြောက်ပေးရမည့် တာဝန် နိုင်ငံခြားကို ထွက်လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အမိမြေကို စွန့်ခွာပြီး တတိယနိုင်ငံတွေမှာ အခြေချလာကြတဲ့ တော်လှန်ရေး မိသားစုတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိနေပါပြီ သူတို့ရဲ့ ရင်သွေးတွေ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ပညသင်ကြားရင်း အရွယ်ရောက်လာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်တွေဟာ သူတို့အခြေချတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားကို အသံနေအသံထားအရ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး၊ အမေရိကန်လူမျိုး တွေနဲ့မခြား ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီး အစိုးရတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါပြီ။ သူတို့လေးတွေကို လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့တတွေက ပခုံးထမ်းတင် ပေးရမည့် တာဝန်ကို ယူရပါတော့မယ်။
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်၊ ဆီနိတ်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက် တက် ရောက်ပြောကြားနိုင်မဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို နေရာပေးရမယ့်အချိန် ရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သဘာဝရင်းမြစ်တွေဟာ တတိတိနဲ့ သန်းရွှေဓားပြဂိုဏ်းက ရောင်းစားလို့ ကုန်သလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လူသားရင်းမြစ် (Human Resources) တွေကို ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရပါတော့မယ်။ ဝေနှင်းပွင့်သုံတို့လို လူငယ်သွေးသစ် လေးတွေကို ရှာဖွေပြီး တဦးနဲ့ တဦး မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပေးဘို့အတွက် လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုတာဝန်တွေကို ဘယ်သူတွေက ယူပြီး လုပ်ကြမလဲ? ကျွန်တော့အနေနဲ့ ပါဝင်ကြိုး စားပေးဖို့ ကတိပြုပါတယ်။ လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေလို့ ပြောနေကြတဲ့ ခင်ဗျားတို့ကော ပါဝင်ကူညီဘို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကို မြှင့်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်သန့်သန့်လေးနဲ့ ဝိုင်းဝန်း ပါဝင်ကြဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး မိမိနိုင်ငံရဲ့ ဒုက္ခတွေကို မမေ့ပါစေနဲ့၊ သူတို့လေးတွေ အားလုံးစုစည်းနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် တအားပေါ့။
“လူငယ်သွေးသစ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲ” တခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြပါစို့၊ စိတ်ဝင်စားသူများ မိမိနေထိုင်ရာမြို့များမှ လူငယ်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆက်သွယ်ကြပါ။ တခုမှာချင်တာက လူငယ်များကို ထိန်းချုပ်ဘို့၊ အသုံးချဘို့မဟုတ်ဘဲ သူတို့အချင်းချင်း တွေ့ဆုံပေးရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ဘို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို အားလုံးရှင်းလင်းစွာ သိစေလိုပါတယ်။
Skype အမည်- htungyaw
Skype name : htungyaw
Posted by Mr Htay Tint at 12:56 AM0comments
Aung San Suu Kyi against her extended house arrest...
Wet inburgering voor Birmase နယ်သာလန်နိူင်ငံသား ဥပ...